Somali News 1.4.22
Published January 5, 2022 at 12:14 PM CST
Tirada kiisaska cusub ee fayraska ayaa ku soo badanaya Nebraska maadaama nooca omicron ee aadka u faafa uu si aad ah ugu faafayo gobolka.
Saraakiisha caafimaadka Nebraska ayaa ku dhawaad 8,600 xaaladood oo cusub u sheegay CDC usbuucii hore. Taasi waa koror 47% ah hal usbuuc gudahiis iyo wadarta ugu sarreysa tan iyo horraantii Disembar 2020.
Madaxa Caafimaadka ee Nebraska ayaa sheegay in kala duwanaanshaha omicron uu hadda ka dhigan yahay 30% ilaa 50% muunadaha shaybaadh ee togan ee sida hidde ahaan isku xigxiga ee gobolka.
Wali ma cadda haddii kala duwanaanshaha omicron uu wado kororka caabuqyada lagu arko Iowa.
Kiiskii ugu horreeyay ayaa la helay horraantii Disembar iyada oo la xaqiijiyay dhowr iyo toban degmo. Buena Vista waxay ahayd gobolka kaliya ee kiis rasmi ah ku leh Siouxland.
Heerka caabuqa coronavirus ee Iowa ayaa kor u kacay usbuucii la soo dhaafay heer aan la arkin ilaa Noofambar 2020, taas oo ahayd bishii ugu xumayd ee masiibada gobolka, sida lagu sheegay xogta la sii daayay Isniintii.
Afar kale oo South Dakotan ah oo qaba COVID-19 ayaa dhintay, Waaxda Caafimaadka ayaa sheegtay Talaadadii, iyo 3,047 qof oo dheeri ah ayaa laga helay cudurka.
Caabuqyada ugu cusub waxay u taagan yihiin baaritaan dhacay galabnimadii Khamiista ilaa Isniinta. Waaxda ayaa sidoo kale xustay in uu dib u dhac ku yimid natiijada imtixaanaadka todobaadkii hore. Laakiin waxay sidoo kale xustay in kiisaska cusub ay wadaan kala duwanaanshaha omicron.